Qarax Gaari Looga Gubay Askarta Itoobiya. – Bogga Calamada.com
Qarax Gaari Looga Gubay Askarta Itoobiya.
January 5, 2018 5:41 pm Views: 174
Wararka ka imaanaya gobalka Baay ee dhanka Konfur Galbeed dalka Somalia waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi uu ka dhacay qarax culus oo lala beegsaday kolanyo ah ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya.
Kolanyada qaraxa lala beegsaday ee Itoobiyaanka ah ayaa ku socdaalayay wadada isku xirta degmooyinka Baydhabo iyo Buur-hakabo ee gobalka Baay,iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano badan oo dhaca inta u dhaxeysa Labadaasi degmo.
Miinada ayaa haleeshay gaari Uuraal ah oo ay la socdeen askarta Xabashida Itoobiya,Miinada ayaa burburisay gaariga Uuraalka ah sidoo kale qaraxa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii Xabashida Itoobiya ee la socotay gaarigaasi.
Ciidamada Xabashida Kufaarta Itoobiya ayaa ka mid ah shisheeyaha kusoo duulay Wilaayaatka dalka waxeyna askarta Amxaarada la kulmaan weeraro dhiig bax ah oo kaga yimaada dhanka Shabaabul Mujaahidiin.